मधुमेहमा पनि गुलियो खान सकिन्छ, यी हुन् विकल्प – Sandesh Press
मधुमेहमा पनि गुलियो खान सकिन्छ, यी हुन् विकल्प
July 28, 2021 212
अन्तर्राष्ट्रिय मधुमेह संघका अनुसार विश्वमा ४२ करोड ५० लाख जना मधुमेहको समस्याबाट पीडित छन् । मधुमेह एक नसर्ने रोग हो । तर पनि यो रोग विभिन्न रोग निम्त्याउने कारक भने बन्न सक्छ । कोरोना भाइरसको महामारीको क्रममा मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका बिरामी कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको बताइयो । जसका कारण पनि मधुमेहको दीर्घकालीन असरको बारेमा धेरै जानकार मानिन्छन् ।
मधुमेहलाई गाउँघरमा चिनी रोग पनि भनिन्छ । खासगरी मधुमेह भएको अवस्थामा चिनीजन्य खानेकुरा खान नहुने चिकित्सकहरु सुझाउँछन् । यद्यपि अरु माध्यामबाट गुलियो स्वाद लिन सकिन्छ । यसका थुप्रै विकल्प छन् ।
मधुमेहमा चिनी एवं चिनीजन्य खानेकुराबाट बच्नु नै मधुमेहको उत्तम उपाय हो । तर के मधुमेहका बिरामीहरुले कुनै पनि गुलियो खानेकुरा खानु हुँदैन त ? त्यो भने होइन । बजारमा मधुमेहको बिरामीको लागि पनि विभिन्न किसिमका खानेकुरा पाउने गरिन्छ । जसमा गुलियो पदार्थ पनि मिसिएको पाइन्छ ।
यदि मधुमेहको लक्षण देखियो भने सबैभन्दा पहिले यसको रोकथामका लागि गुलियो पदार्थ खान छाड्नु नै उचित हुन्छ । अन्यथा जीवनको जोखिम बढ्न सक्छ । एकपटक मधुमेहको स्थिति बिग्रिएपछि पुनः त्यसको अवस्था फर्काउन कठिन हुन्छ । तर पछि बिस्तारै मधुमेहबाट बच्दै केही गुलियो पदार्थ पनि खान सकिन्छ ।
कच्चा वा जंगली मह विश्वभर मनपर्ने स्वीटनरहरू मध्ये एक हो । यो केवल एक मिठाई हो । तर यसमा भिटामिन बी, एन्जाइम, जिंक, फलाम, क्याल्सियम, पोटासियम, एन्टी–अक्सिडेन्ट, फस्फोरस, नियासिन र राइबोफ्लेभिनको राम्रो मात्राले यो स्वस्थ खानेकुरा बन्छ । यी सबै पोषक तत्वहरू ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल प्रणालीमा पाइने ब्याक्टेरियालाई उत्तेजित पार्न सक्षम हुन्छ ।
परापूर्वकालदेखि नै छोकडा र त्यसबाट बन्ने गुलियो मिठाई धेरैको रोजाइमा पर्दै आएको छ । यसमा धेरै पोषक तत्वहरू समावेश हुन्छन् । जस्तै, म्याग्नेसियम, भिटामिन बी, पोटासियम, तामा, म्यागेनिज र फलाम आदि । यसको नियमित सेवनले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको स्तर नियमित गर्छ । साथसाथै कार्बोहाइड्रेट, फ्याट र प्रोटिनको अवशोषणमा मद्दत गर्छ ।
पेय पदार्थमा मिठास जोड्नको लागि यस रुखको प्रयोग सदियौंदेखि एक प्राकृतिक स्वीट्नरको रुपमा हुने गरेको छ । यसको पातमा मिठास हुने गर्छ । यो वजन कम गर्ने प्रयोजनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ । चिकित्सकहरु यसको कुनै साइड इफेक्ट नहुने बताउँछन् । यसमा क्यालोरी र कार्बोहाइड्रेटको मात्रा पनि बढी हुँदैन ।
नरिवल विभिन्न शारीरिक लाभ र प्रयोगको लागि परिचित छ । नरिवलमा हुने पानीमा फलाम, पोटासियम, क्याल्सियम, जिंक र एन्टी–अक्सिडेन्ट इत्यादि खनिजहरूको प्रचुर मात्रामा हुने गर्छ । नरिवल विश्वको लगभग सबै ठाउँमा प्रशस्त मात्रामा उब्जाउ हुने खानेकुरा हो । त्यसैले पनि यो सर्वसुलभ र बढी प्रभावकारी खानेकुराको रुपमा चिनिन्छ ।
केरामा फाइबर र पोटासियमको साथ भिटामिन बी र भिटामिन सीको पर्याप्त मात्रा पाइन्छ । यही पौष्टिक तत्वका कारण केराको परिकार पारम्परिक खानामा बढी प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ ।
हालसालै म्यापल सिरप विश्वभरि प्रख्यात प्राकृतिक स्वीटनरको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । यो सिरप पौष्टिक तत्वमा धनी छ, जसमा म्यागाजिन एन्टि–अक्सिडेन्ट्स, जिंक, क्याल्सियम, फलाम र पोटासियम जस्ता पौष्टिक तत्व पाइन्छ ।
खाजा र पेय पदार्थमा प्रयोग गरिने सबैभन्दा मनपराइएको गुलियो पदार्थ हो, आर्टिफिसियल स्वीट्नर । यस्तो स्वीटनर दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने चिनीभन्दा उपयुक्त र स्वादिष्ट पनि हुन्छ । यसमा नगण्य मात्रामा क्यालोरी हुन्छ । यही कारण हो कि आजको दिनमा यो चर्चाको विषय बनेको छ । यसलाई वजन कम गर्न पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । मधुमेह बिरामीहरूले मिठाइको तृष्णा कम गर्न पनि सहयोगी सिद्ध हुन सक्छ ।****** पुरा समाचार हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
Prevराजलाई देखेर शिल्पाले आफ्नो होस गुमाइन्, यो सब किन र कसका लागि गर्यौ भन्दै गरिन विवाद ?
Nextराज कुन्द्रा घटनामा नयाँ रहस्य खुल्दै, साढे ६ करोड रुपैया भएको खाता सिल